Features - ona kuburikidza nenzira mafungu ROM rinowanzova upenyu
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Features - ona kuburikidza nenzira mafungu ROM rinowanzova upenyu
Nepachinko Machine of ROM ndiko, simba nguva, kazhinji nguva, rakakamurwa slump nguva. Zvichienzaniswa yakasimba mwaka nokugumburwa nguva, zvinogona Normal hupenyu kuudza zvakaoma. Dzinenge features, dzakadai simba mwaka nokugumburwa-upenyu, zvakaoma kuona ndechokuti zvakajairika upenyu. In
, zvichava chete muenzaniso worudzii zvinhu zvinoitika ROM zvomutambo hwandaiva upenyu, asi achasuma.
ari kuipa munguva, kana kakawanda parinouya, kuti kana muropa zvava zvikuru rirege kuonekwa kwazvo. Kutaura kana, pasina chokwadi kuti haisi ichi chaizvo raparadza, chete zvinhu vanoti munhu muropa kukuru haisi. Maererano kugadzirwa, nezvimwewo, zvinoita rinosvika uyewo kugadzirwa uyewo inobuda yazvo nenzira.
Zvisinei, mugumisiro uchida vakawanda kuteerera ndiyo kugadzirwa uye kusvika, akadai anonzi nakisa kupisa.
akabuda mune siyana kusvikwa iri kugara, hapana zvishoma kungangosava kunze zvikuru ATSU kugadzirwa uye kusvika. Uyewo, rotational kumhanya kusvika rova, achiva vasati uye pashure paavhareji 300 kutenderera, kunyange Tikabvisa ari jackpot, kunewo chokwadi kuti mumwe-kure. Kunyange kana muedzo-kare
nguva rutapudzo, kana kwete kuramba, mukana kushanduka une zvangoitikawo kuti haasi kuvharwa nyore. mamiriro akadaro achava chepfungwa kwagara upenyu ROM. Achitaura sedimikira
, handina kutora kupfuura mari goridhe, icho hurumende kuti haritombotauri kuita mari. Kamwe nayo vakaenda zvinopesana, mune kuipa munguva, kwete zvichida kune chokwadi kuti panguva chemabhazi rakaoma kunzwisisa.
kunyange kana paine zviratidzo vakakwana kudaro hupenyu, nekuti kuti vaizorasikirwa zvakare Vatevere, unofanira kungwarira. Zvadaro, muna mashoko girafu panyaya chakaipa kudaro hupenyu, unoziva zvakanaka uye kuona mutsetse girafu.
centre mutsetse mumire wave zvishoma achitevedza mutsetse chati ndechokuti shoma muropa. Uye akabuda, paavhareji, kunoratidza kuti akadzokorora kana kwete kunze. Pakadaro pane mashoko aibuda, ndinofunga kuti Zvinogoneka kuti anenge apinda inowanzotorwa nguva anogona kutsunga kuva mukuru You.
Normal upenyu muropa asi kuri nyore kutamba nokuti zvishoma, uchawana mukana kupinda slump nguva pashure peizvi. Asi kunyange kana paine zviratidzo zvenguva dzose muupenyu, 300 uye kana kutenderera zvikuru muropa kwave akatevera kana, mune nyaya kugadzirwa akavanzvenga hakuchisina dzakabudirira, saka pane mukana kuti anenge apinda
kugumbuka nguva, tafura kufamba kunyange kana wafunga kufunga chinhu chakanaka kuita. Mukupesana, kuti kunewo mukana kuti tama kune simba nguva, kazhinji nguva. Zvichienderana ezvinhu pamberi sefungu kwomuzvarirwo upenyu, handizivi kana iri kana davi.
kubva Edza varove Chero nzira, nokuti ndinofunga kuti ndiwo mamiriro ezvinhu apo mamiriro anogona vatongwe, yava hachingatongovakuvadzi aibuda kuedza rova. Kana Minukere hwandaiva upenyu zvikuru, pane kunobatsirawo kuti kuverenga remangwana mujinga chekubuda.
kana kuva Zvisinei zvose rinotsamwa Kana maturo kana pfungwa, kana kuva asingabatsiri kufunga kuti ATSU Squid, pashure zvose, nokuti kakawanda kuti nekutumirwa kwemauto yakanga simbe kuti payout haangazorori neherikoputa pasina Uyewo kuwedzera, kwete chete sputter uye closeout uye, tinofanira kungwarira nokuti paisazova nguva kuti bhora ari mumwe tafura.